mubvunzo Emirates Fleet A380
1 gore 5 ago #761 by Aidablu1508
Hi, ini ndiri kuedza kuwedzera chiropa kune Emirates Fleet paA380, asi chiveries hachiratidzi kana VC isiri kushanda, chii chandiri kuita zvisakarurama, iwe unogona kundibatsira ..
1 gore 5 ago #762 by Dariussssss
Chinhu chimwe chakaitika kwandiri. Iine chimwe chinhu chingaita nehuwandu hwayo, nokuti iwe unoziva kuti pane maviri version 841 uye 861, imwe ine RR uye imwe neE EA GP2700 injini, saka iwe unofanirwa kureva nhema, unofanirwa kuita kuti ndege ifunge kuti buri livery iwe unoisa ndiyo yakarurama. Ingoshandisa kodhi yeE Emirates skin, kuwedzera dzimwe liveries. Inofanira kushanda.
1 gore 5 ago #763 by Aidablu1508
Ndinokutendai zvikuru, izvo zvakashanda, ndanga ndichitanga kubvisa bvudzi rangu nembambo kuti izvi zviitwe
1 gore 4 ago #780 by jck003
edza uye uidzore zvakare